Iza marina ny mpihaino kendrenao? | Martech Zone
Talata, Jona 14, 2011 Alarobia, Oktobra 16, 2013 Douglas Karr
Iray amin'ireo tsy fahazoan-kevitra fototra momba ny media an-tserasera ny famantarana hoe iza ny olona kendrenao. Betsaka ny olona mifantoka amin'ny hoe misy na tsia ny vinan'izy ireo. Tamin'ity herinandro ity dia niara-niasa tamin'ny orinasa iray izahay izay nitaraina fa tsy ao anaty Internet fotsiny ny fanantenany manana ny lanjany C.
Tsy hiady hevitra aho raha marina izany na tsia. Saingy ny haino aman-jery an-tserasera dia misy olona maro samihafa izay afaka mitaona ny fanantenana C-level ary mampandroso azy eo alohan'izy ireo. Manome fotoana ny hetsika sosialy. Manakaiky anao ny tambajotra amin'ny alàlan'ny tranonkala toa an'i LinkedIn. Ny lahatsoratra bilaogy, ny resaka sosialy ary ny mpanaraka anao dia manampy anao hanohy hanodidna ny vinavina ary hampiharihary ny orinasanao.
Ohatra, raha mitady mpamatsy vola sy mpandraharaha fanombohana ny orinasanao, dia orinasa matanjaka, IP sy mpisolovava amin'ny fanombohana, ary mpitan-kaonty fanombohana no olona tsara hatrehana. Manana ny fifandraisana izy ireo ary manome ny sivana sy fiarovana an'ireo fanantenana ireo. Ataovy izay hampiavaka azy ireo dia ho tonga eo alohan'ilay olona ilainao ianao.
Rehefa miasa ny tetikadinao ara-tsosialy ianao dia aza manantona ny mpitsidika na avy aiza izy ireo, mifantoha amin'ny resaka momba anao ireo mpitsidika ireo ary mitondra anao amin'ny vinavina! Ny fifandraisana amin'ireo influencers sy sivana ireo dia zavatra sarobidy izay tsy tokony holalanao.